Dhageyso :-Dowladda Fedraalka Somaliya Oo Baaq Loo Diray - Awdinle Online
Dhageyso :-Dowladda Fedraalka Somaliya Oo Baaq Loo Diray
November 2, 2019 (AO) – Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo wareysi siiyey laanta af somaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha ay geysteen wabiyada Shabelle iyo Jubba ee dalka.
Cumar Cabdirashiid wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatada iyo xaaladda daran ee ka taagan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaarihii hore ayaa tilmaamay in xilligii uu ahaa Ra’iisul wasaaraha ay dhacday fahaada xoogan, balse aysan la mid ah tan maanta taagan .
Cumar Cabdirashiid ayaa kula taliyey dowladda Soomaaliya in ay lacag Deyn ah qaadato oo gaaraysay shan milyan si loogu gurmado, deg degna loogu caawiyo dadka ay saameeyeen fataahadaha hadda ka jira deegaano hoostaga dowlad gobleedyada Konfur Galbeed iyo Hir Shabelle .
ayaa xusay inay muhiim tahay in dhaqso looga jawaabo saameynta ka dhalatay fatahaadaha, islamarkaana aan la sugin lacagta qaaraanka ah ee soo uruuraya, si loo bad baadiyo nolosha dad badan oo halis ku jirta.
Hadalkan Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid ayaa ku soo aadaya, iyadoo haatan dowladda iyo shacanka Soomaaliyeed ay wadaan dadaallo xoogan oo loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaateysan .
Previous articleDhageyso :-Somaliland Oo Ka Hadlay Geeridii Taliyihii Ciidanka Boliska
Next articleSomaliland Police Commissioner General Fadal Dies